Xildhibaano u hiiliyey Caawa Taliye Saadiq Joon caawana la hooyanaayo Shirkoole | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Xildhibaano u hiiliyey Caawa Taliye Saadiq Joon caawana la hooyanaayo Shirkoole
Xildhibaano u hiiliyey Caawa Taliye Saadiq Joon caawana la hooyanaayo Shirkoole
Waxaa caawa Xaafada Shiirkole ee degmada Hodan ka taagan xiisad dagaal oo laga cabsi qabo in uu ka dhax qarxo ciidamo badan oo daacad u ah Janaraal Saadaq Joon iyo ciidamada dowlada federaalka Soomaaliya.
Xildhibaano katirsan Baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa caawa gaaray xaafada Shiirke ee degmada Hodan, ciidamadan ayaana ku sugan guri uu halkaasi ka degay Janaraal Saadaq Joon.
Sida aan wararka ku helnay Xildhibaanada caawa gaaray waxaa kamid ah Xildhibaan Cabdiraxmaan Odawadaa , Xildhibaan Mahad Salaad iyo Xildhibaan Cabdi Saabir oo sidoo kale ah Wasiirka kaluumeesiga maamulka Galmudug.
Xildhibaanadan iyo kuwa kale oo katirsan Baarlamaanka federaalka kuna heyb ah Saadaq Joon ayaa wararku sheegayaan in ay deegaansanayaan xaafada Shiirkole halkaas oo xiisad dagaal ka jirto.
Mahad Salaad oo kamid ah Xildhibaanada caawa ku sugan xaafada Shiirkole ayaa sheegay in Farmaajo iyo taliyaha Hay’ada nabad sugida Soomaaliya Fahad Yaasiin ay duulaan kusoo yihiin xaafada Shiirkole , waxa uuna ku baaqay in ciidankaasi la iska difaaco.
”Xildhibaanadeena Habar Gidir ayaa hada soo gaaray Shiirkole. Farmaajo, Fahad iyo Biixi dadkeena ayay duulaan ku yihiin. Dadkeena waxaan ugu baaqaynaa in ay iska difaacaan cadowga iso soo bahaystay. Waanan ka guuleysanaynaa inshaa’allah” ayuu yiri Mahad Salaad.
Xaafada Shiirkole oo ah xaafada ay ku badan yihiin qabiilka uu kasoo jeedo Saadaq Joon ayaana caawa si weyn looga dareemayaa xiisad dagaal, waxaana laga cabsi qabaa in xaafadaasi weerar ku qaadaan ciidamo ka amar qaata Madaxweyne Farmaajo.
Previous articleJen Saadiq Joon war ka soo saaray xiisaha Dagaalka ee Caawa
Next articleWar deg deg ah Gudoomiyaha degmada Xamar jajab oo la dilay hada
Wararkii ugu danbeeyey Qaraxii ka dhacay magaalada Kismaanyo
War deg deg ah Qarax ka dhacay Magaalada Kismaanyo oo Ciyaartooy lagu xasuuqay
Alshabaab isku soo dhiibay Dowlada
Sam sam oo wal wal la soo darsay
Masuuliyiinta dalka Sri Lanka oo sheegay in dalkooda laga helay dhagax qiimo ahaan jooga 100 milyan oo dollar.
Gobolka Galgaduud maleeshiyo beeleed dad shacab ah ku dilay deegaanka Galdogob.
Wasiirka Wasaaradda Diinta iyo Arrimaha Awqaafta ee oo goordhaw shaaciyey...
Mohamed Abdullahi Mohamed - May 11, 2021 0
Wasiirka Wasaaradda Diinta iyo Arrimaha Awqaafta ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa goordhaw shaaciyey in dalka Soomaaliya aysan berri Ciid u aheyn, isla markaana la kaamilo...
War Deg Deg ah: Qarax uu ku dhintay Guddoomiye ku xigeenkii...
Wasiirka gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka ee dawladda federaalka, Khadiija Maxamed Diiriye...
Saddex gantaal oo laga soo tuuray Lubnaan oo haleelay badda Mediterranean-ka...
Midoowga Musharaxiinta oo war lid ku ah Farmaajo soo saaray
Dowladda Sucuudiga oo cambaareysay waxa ay ku tilmaantay “xadgudbka ay...
Gen. Cabdisamad Cali Shire oo ahaa Madaxweyne ku xigeenkii...
Warbaahinta Libiya oo sheegay in Diyaarad Dagaal oo nooceedu ahaa...
Mohamed Abdullahi Mohamed - July 30, 2021 0
War deg deg ah Qarax ka dhacay Magaalada Kismaanyo oo...
Masuuliyiinta dalka Sri Lanka oo sheegay in dalkooda laga helay dhagax...
Wasiir Fiqi | oo sheegay in farmaajo maanta baarlamaanka uu leeyahay...
Mohamed Abdullahi Mohamed - May 1, 2021 0